ग्रेटर नेपाल संबन्धमा चिन,पाकिस्तान र कास्मिरको समर्थन |रास्ट्र संघमा छलफल|नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्छ (जय नेपाल लेखेर सेयर गराै) -
Home News ग्रेटर नेपाल संबन्धमा चिन,पाकिस्तान र कास्मिरको समर्थन |रास्ट्र संघमा छलफल|नेपाल आफै अग्रसर...
ग्रेटर नेपाल संबन्धमा चिन,पाकिस्तान र कास्मिरको समर्थन |रास्ट्र संघमा छलफल|नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्छ (जय नेपाल लेखेर सेयर गराै)
ग्रेटर नेपाल संबन्धमा चिन,पाकिस्तान र कास्मिरको समर्थन |रास्ट्र संघमा छलफल|नेपाल आफै अग्रसर हुनुपर्छ
केही दिनयता गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
ऋषिङको एउटा पुल उद्घाटन गर्नु थियो। त्यहाँ गएँ। जिल्लाको दक्षिण–पश्चिम भेग घुमेर साथीहरू भेटघाट गरेर आएको छु। पुल भन्ने एउटा उपन्यास पढेको थिएँ मैले। ठूलो क्रान्ति त्यसकै वरपर भइराखेको थियो। तर अहिले परिबन्दले देशलाई झक्झक्याउने काम पनि त्यसैले गर्‍यो, पुलले। तर मेरो उद्देश्यचाहिँ विकास निर्माणका काम, हामीले गरेका पुल, बाटोघाटो, सडक, भवन सबै हाम्रै योगदान हो। त्यसैले हामीले बनायौं। जनताले बोलाउँछन्। राजनीतिकर्मीले जनसम्पर्क पनि गर्नुपर्छ। जनताले बोलाए अनि गएँ म।
बुल्दी पुलमै यति धेरै विवाद हुनुको कारण के होला ?
यो सरकार र सत्ताधारी दलको मती भ्रष्ट भएर हो। त्यो ठूलो विषय नै थिएन। हामीले मिलेर बनाएको पुल थियो। उपभोक्ता समितिका साथीहरूले आइदिनुपर्‍यो; जसरी पनि पुल उद्घाटन गरिदिनुस् भनेपछि म आएँ। सामान्य कुरा थियो। उद्घाटन हुन्थ्यो, जान्थ्यौं। उनीहरूले ठूलो इस्यु बनाए। अरू केही होइन।
पुल उद्घाटन प्रकरणपछि कांग्रेस सडकमा गयो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईंचाहिँ सरकारप्रति अलिबढी आक्रामक हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
म त्यस्तो प्रतिक्रियामा आउने मान्छे होइन। केपी ओलीले जब छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएर देशलाई अन्योलतर्फ धकेलेदिए। ७० वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौं। त्यतिखेर हामीले सोचेका थियौं। पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने, सरकार बन्ने र भत्किने, पाँच वर्षसम्म निरन्तर कोही पनि सरकार नटिक्ने हामीले देख्यौं। त्यसले विकास निर्माणमा नोक्सानी हुने र देशमा राजनीतिक वितण्डा चलिरहने भएपछि दिक्क भएर हामीले यो संविधान बनाएका हौं। यो संविधान बनाउँदा अब अस्थिरता नहोस् भनेर धेरै कुरा सोचेर प्रबन्ध पनि गरेको हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि सितिमिति अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अनि दुई वर्ष भएपछि मात्र राख्न पाइने र त्यो पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिएर मात्र राख्न पाइने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो–यस्तो प्रावधान राखेर सरकार पनि स्थिर होस्। प्रधानमन्त्रीले पनि पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनेर हामीले विघटनको धारा नै हटाइदियौं। बहुमत भएन; दुई दल मिलेर गर्दा पनि भएन भने मात्र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यो विषय त पछाडि आउँदै थियो। तर तपाईंमाथिको घटना भयो त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेस सडकमा गयो। अरू घटना र परिघटना त पछिपछि विकसित हुँदै थिए। व्यक्तिगत रूपमा बुल्दी पुलको घटनापछि भावनात्मक रूपमा तपाईंलाई अलिबढी छोएको हो कि ?
त्यो त संयोग मात्र हो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस सुतिराखेको जस्तै थियो। अरू मानिस भन्थे– कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी कहाँ गयो भनेर यो कुरा चलिरहेको थियो राष्ट्रिय जनमानसमा। मैले भन्नैपर्छ कि यतातिर आएर मिडियाको माध्यमबाट केही विचार दिँदै आएको थिएँ। हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौं त्यसको मूल मर्म कहाँ हो ? के हो ? त्यसलाई नेपाली जीवनमा कसरी उतार्ने ? यसका मूल फ्याक्टर के हुन् ? आदि विषयमा मैले मिडियामा लेख्दै र भन्दै गएरहेको थिएँ। देशका मूर्धन्य विद्वान्हरूले राम्रो विचार आयो। कांग्रेसमा विचारशून्यता भनेको त यस्तो राम्रो देशलाई नै दिशा दिने काम भयो भनेर मान्छेले प्रतिक्रिया जनाइरहेको मैले अनुभूत गरेको थिएँ।
Previous articleप्रधानमन्त्री मन्त्री नेता सबैले सुन्नैपर्ने कुलमानका कुरा: नेपालको राजनीति तात्तिएकै बेला यसरी बोले (कुलमानलाई सपाेट सबैले सेयर गराै)
Next articleसिधा कुरा विवाद बारे मुख खोले Rabi Lamichhane ले | सम्झना भुजेलसंग दुश्मनी छैन, न्युज 24 बारे सत्य